Learn how to createalogin form which shakes to indicate that the password you entered is wrong using CSS and jQuery.	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
1546 days ago	(http://nineninesanay.blogspot.com)
မြန်မာကျောင်းပိတ်၊ ထိုင်းကျောင်းပိတ်တော့ တရုတ်ကျောင်းက တစ်နေကုန် တက်ရတော့တယ်။ ကျောင်းက ညနေ ၅နာရီမှ ဆင်းလို့ အရင်လို ကျွန်မ အားချိန်တွေ သိပ်မရခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ချက်စားလို့ရတဲ့ ဟင်းတစ်မျိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ထမင်း၊ အိမ်ဟင်းလေးပါပဲ.. ကျွန်မလို အချိန်ချိုတဲ့သူတွေ လ	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက် နှင့် အရိမဒ္ဒန (၄)
ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ နံနက်---------ယနေ့ နံနက် တွင် ဟို တယ် ဝန်ထမ်း တံခါး လာခေါက် သည် နှင့် ကျမ တံခါး ဖွင့်ပေး လိုက်သည် စားစရာ တွေ ဘာ မှပါ မလာ တော့ပါ---ဟိုတယ် ဝန်ထမ်း က ဧည့် သည် စောင့်နေ ပါသည် ဟုသာ အသိပေးပြီး ပြန် ထွက် သွား သည်။ မနေ့ညနေ က သူ တည်းခို နေသည့် ဘားမား တည်းခို ရိပ်သာ တွင် ကောက်ညှင်းပေ	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
Mastering frequently used applications increases the productivity significantly.Controlling these applications via keyboard isapart of this "mastering process" which helps you use an application with2hands = much faster.Also, knowing the tricks of tools inside these products	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
အရိုးခိုက်အေ	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
Add to: အရိုးခိုက်အေ">
1547 days ago	(http://ywartharlay-ytu.blogspot.com)
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တ	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
Add to: လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တ">
Myanmar Singer and Composer, Kaung Myat released his first solo music album "Floaty Cloud"
Myanmar Singer and Composer, Kaung Myat read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: Myanmar Singer and Composer, Kaung Myat ">
Learn how to combine the CSS property 'z-index' and the power of jQuery to createaunique Image Gallery which haveaappearance ofapile of pictures.	read more » Discuss Add this link to... Bury